Kdenlive: inonakidza vhidhiyo mupepeti iwe yaunofanira kuyedza | Linux Vakapindwa muropa
Isaac | | Multimedia, Free Software
Kdenlive Ndine chokwadi chekuti vazhinji venyu munotozviziva, asi kune avo vashandisi vasati vazviziva, iti ndicho chirevo cheKDE Isiri-Linear Vhidhiyo Edhiyo. Uye zvirokwazvo, chirongwa icho vagadziri ve KDE vakagadzira yekugadzirisa vhidhiyo nenzira isiri-isina mutsetse uye yakavakirwa paMLT fomati. Icho chirongwa chakanaka chine zvishoma kana kushaya chinhu chekugodora mamwe akavharwa sosi zvirongwa kuti uite zvakafanana chiito.
Zvakare, sezvaunga fungidzira kuti ndeye mahara uye yakavhurwa sosi, ndeye mahara. Kunyangwe yakasikwa muna 2002 na Jasoni Wood, Parizvino inochengetwa neboka revapurogiramu, uye kubva pamazuva ekutanga kusvika nhasi, software iyi yakachinja zvakanyanya. Iyo ine rutsigiro rwemifananidzo yakawanda, vhidhiyo uye mafomati ezwi nawo ekuridza nawo nekugadzira maficha akajeka ane mhedzisiro uye zvimwe zvekugadzirisa maficha
Pakati pemafomati akatsigirwa pane ayo ane hukama ne FFMpegsezvazviri zvinoenderana neiyi. Mune mamwe mazwi, inogona kutsigira MOV, AVI, WMV, MPEG, XviD, FLV, nezvimwe. Ehe saizvozvo inotsigirawo 4: 3, 16: 9 factor ratios, PAL, NTSC, dzakasiyana HD zviyero, HDV, nezvimwe. Pasina kupokana, huwandu hukuru hwemikana yekuburitsa mavhidhiyo ako akagadziridzwa, neakawanda maturusi ekushandira kugadzirisa mifananidzo, mavhidhiyo uye ruzha rwatinogona kuwedzera.
Kana iwe uchida kuyedza, unogona kuwana iyo webhusaiti yepamutemo yeprojekti uye uwane iyo download nzvimbo. Iwe zvakare uchawana inonakidza Wiki mairi yekupindura mibvunzo yako, rumwe ruzivo nezvechirongwa, kubata, foramu, nhau, uyezve akawanda mapakeji ezve akasiyana akasiyana (RPM, DEB mapakeji mapakeji, nezvimwewo), zvakare shanduro dzeMac uye Mahwindo. Nenzira, inowanikwawo mumapakeji epasirese seSnap, Flatpack, uye Appimage, iyo inogona kuiswa nyore nyore pane akasiyana distros ... Edza iyo, uye hauzonyadziswa!
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Kdenlive: inonakidza vhidhiyo mupepeti iwe yaunofanira kuedza
zvakanyanya kunaka kuti uve Mahara !! ! Iyo haina chinhu chekugodora kune anodhura kwazvo edhita edhita. Ndanga ndichiishandisa kwemakore mazhinji ekugadzirisa kwehunyanzvi.
Mhoro Carlos, wakamboshandisa OpenShot? Iwe unofunga izvi zvinokunda here? Kutenda mberi.
Mune maonero angu, Kdenlive inorova Openshot. Ivo vaviri vane akasiyana anotarisa. Openshot inoda kuve yakanaka vhidhiyo mupepeti iyo iri nyore kune chero munhu kuti ashandise, nepo Kdenlive ine chinangwa chekuve yakanyanyisa nyanzvi mupepeti. Kuti ndikuudze iwe iyo Openshot ichangobva kuburitsa keyframe mumhedzisiro, nepo Kdenlive yaive nayo zvisati zvaitika.
Mune maonero angu Kdenlive inorova Openshot. Maitiro eO Openshot ndeyekuita yakanaka, nyore kushandisa vhidhiyo mupepeti, nepo Kdenlive yakanangana zvakanyanya pahunyanzvi munda uye nekudaro inobvumira kugadzirisa nekunyatso kurongeka.
Mwedzi Kupfuura Linux akadaro
Iniwo ndiri wekufunga kuti kdenlive yakanyanya kukunda Openshot, uyezve chii, kdenlive iri padanho rakaenzana nevakawanda Mac uye Windows editors vakaita iMovie uye Sony Vegas. Ndi kdenlive ndakaita mavhidhiyo akakwana sevamwe vangu vanoshandisa windows uye mac.
Pindura kuMes Que Linux
Ndeye windows here? Ini ndoda yakapusa vhidhiyo mupepeti kuti ndigadzire mamontage emifananidzo uye mimhanzi kuna amai vangu. Iwe unokurudzira chero? Googling ini ndazviona izvo pano https://tueditordevideos.com/fotos-musica/ Ivo vanokurudzira iyo Kizoa, asi ini handizive kana ndichazoziva mashandisiro ayo. Chii chaunondikurudzira? Ndatenda, ndapota, iko kupa chipo :)
Mubvunzo. Ini ndaishandisa mupepeti zvakajairika uye kubva kune rimwe zuva kuenda kune rakatevera rakanyangarika mumitsara yekugadzirisa (vhidhiyo uye odhiyo), tambo inofamba yakatwasuka yaitaridza poindi yekutamba yakanyangarika uye handikwanise kuona mifananidzo pane yekutarisa kana. Iwe unogona chete kuona iyo vhidhiyo kubva pane clip asi kubva ipapo haugone kuishandisa, hongu. Unogona kundiudza maitiro ekugadzirisa? Ndatenda
Ichi chirongwa Chii chinodiwa nemuchina kuti chishande nemazvo?
Ndakaona kuti munguva pfupi yapfuura mupepeti wevhidhiyo anonzi DaVinci resolution akataura zvakanyanya, chirongwa chekugadzirisa chakakurudzirwa kushanda nemhedzisiro uye kururamisa ruvara?
Izvo zvinogona zvakare kukubatsira iwe, ndiri kuenda kuchizama: https://editorvideo.tech